Ngubani omele afake ishishini labo?
Nawuphi na ummi wase-United States ongaphezu kweminyaka eli-18 angabandakanya e-US, ukudibanisa akukaze kube lula.
Ngaba kufuneka uyihlanganise?
Ukuba wena okanye ishishini lakho linempahla onokuthanda ukuyikhusela, ukubandakanya okanye ukwenza iNkampani yeTyala elinoMda ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuba uyiqwalasele. Esona sizathu sikhankanywa ngokufuthi sokubandakanya ishishini kukukhusela iiasethi zabanini, ezaziwa njengabanini zabelo kumbutho, okanye amalungu enkampani enamatyala athile. Ngokudibanisa okanye ukwenza iNkampani yeTyala eliNqabileyo (i-LLC), abanini banokuzibandakanya kwishishini ngaphandle kokubeka ipropathi yabo emngciphekweni ongafanelekanga. Ukwenza i-LLC okanye ukufaka ishishini lakho yenye yeendlela zokukukhusela kwityala lakho. Ngaphandle kwenkcitho encinci ebonakalayo ngaphambili, kunye nesidingo sokugcina izinto zecandelo, akukho "kuphazamiseka" ekubeni nekhaka endaweni yokuxanduva.
Esinye isizathu sokuba abanini babandakanye amashishini abo zizibonelelo ezinokubakho zerhafu ezinikezelwa yimibutho. Nangona iqumrhu lika “C” liphantsi komgibe “werhafu ephindwe kabini”, oku kunokuthintelwa, ukuba kufanelekile kwishishini lakho, ngokuseka ishishini lakho njengequmrhu lika “S” elinentlawulo yokudlula kwirhafu.
Uninzi lwamashishini owabonayo akujikeleze ngalo naluphi na uhlobo lweshishini olunokubakho okanye uxanduva lwerhafu lwenziwa njengemibutho yokubonelela ngezokhuseleko ezichazwe apha ngasentla. Oku kuyinyani ngokukodwa kwimisebenzi; Oogqirha, amagqwetha, abagcini zincwadi, abayili bezakhiwo, njalo njalo. Kuyinyani nakwimizi-mveliso kuwo onke amanqanaba asuka kwindawo encinci yokungenisa izixhobo ukuya kwi-Anheuser Busch's kunye neMiller's yelizwe leshishini. Ngapha koko, malunga naluphi na uhlobo lweshishini olunokubhengeza rhoqo iintlobo ezahlukeneyo zamatyala.
Izibonelelo zokuNgenisa okanye ukwenza i-LLC
Imibutho kunye nee-LLCs zizinto zomthetho ezahlukileyo ezibonelela ngokunyanzela ishishini, ezomthetho kunye nerhafu. Ngokwenza iqumrhu okanye i-LLC, unga:
Nciphisa uxanduva lwakho lobuqu: Ngelixa abanini babanini bepropathi yobunini okanye ubuhlakani ngokubanzi bunetyala elingenamda kuzo zombini izinto zeshishini kunye neeasethi zabo zobuqu, kubandakanya amakhaya abo, iimoto, iiakhawunti zebhanki, kunye neeakhawunti zomhlala-phantsi, abanini bamashishini bagcina ishishini labo kunye nokuchonga kwabo. Oku kuguqulela kubungozi obuncitshisiweyo, okanye obulinganiselweyo, kwiiasethi zakho zobuqu.
Ukunciphisa iRhafu: Imibutho idibene irhafu ngexabiso eliphantsi kunabantu, kunye neendleko ezithile zeshishini, ezinje ngeInshurensi yezeMpilo, uKhenketho ngezoShishino, uKonwatyiswa kwabaThengi, njl.njl. umvuzo.
Phucula ukuthembeka kwakho: Ulwakhiwo lwendibaniselwano lunokuthumela umyalezo onamandla kubathengi bakho, abathengisi, abakhuphisana nabo, kunye nabanye oosomashishini malunga nokuzinikela kwakho kushishino olunzulu kunye nempumelelo eqhubayo yelinge lakho. Kwabaninzi, "Inc." okanye "i-LLC" ifanekisela isigxina, ukuthembeka kunye nesiqu- ixabiso elongezelweyo kuwe nakwinkampani yakho!
Ukutsala abatyali mali kunye noTyalo mali: Amashishini anganyusa imali ngokuthengisa isitokhwe. Abatyalomali banokukhetha ukuthenga izabelo kwiqumrhu ngenxa yokunciphisa uxanduva lomntu.
Ukuqinisekisa ngoBomi obuQhubekayo: Imibutho yamashishini inokunyamezelana nolwakhiwo lweshishini elisemthethweni, ngobomi obunokuthi bongezelele ngaphaya kokugula, ukuhamba, okanye ukusweleka kwabanini bazo. Ukubandakanya kuthintela ukubanjiswa ngumthetho okanye, ukupheliswa kweshishini elinokubakho ukuba iqabane okanye umnini oswelekileyo uyafa okanye uyahamba.
Ukuhambisa ubunini: Ukudibanisa kukuvumela ukuba ugqithise ubunini beshishini ngokuthengisa isitokhwe.
Ulawulo olumbindi: Njengequmrhu, ibhodi yabalawuli beshishini lakho inegunya lokwenza izigqibo ezinkulu zeshishini kunye nezivumelwano ezibophelelayo, ngokuchaseneyo nobambiswano, olubeka eli gunya ezandleni zeqabane ngalinye ngokubanzi. Endaweni yokuba nexhala lokuba umntu othile angathatha isigqibo esinokuthi sikhokelele kubunzima bezezimali kuwe okanye kwinkampani yakho iphela, kubandakanya ukuqinisekisa ukuba bonke abadlali abaphambili kwinkampani yakho bahlala ebhodini kwaye banolwazi.
Abo baqesha iinkonzo zakho banokunyanzelisa ukuba ufake inkampani yakho ngezizathu ezahlukeneyo zokunika ingxelo zerhafu okanye izizathu zetyala. Umzekelo, ukuba inkampani ikubhatala njengonokontraka ozimeleyo, kukho umngcipheko wokuba i-IRS ibone ukuba ungumqeshwa kwaye yiyo loo nto yenza ukuba inkampani ekuqeshele iinkonzo zakho ibenoxanduva lokuhlawula irhafu kwaye inokuba semngciphekweni wokufumana ubunzima. Isohlwayo xa bengakhange babambe okunjalo. Kwiimeko ezinje ngezi, umxhasi wakho unokukhetha ukuqesha iqumrhu lakho endaweni yakho ngokuthe ngqo, kwaye ngenxa yoko uyeke ukugqitha kuyo yonke i-1099 okanye ubunzima bokuhlelwa kwabasebenzi.
Imigangatho yemali engenileyo
Akukho mfuneko yengeniso okanye imibundu yokwenza iqumrhu- ungaqala umncinci njengokusebenza komntu omnye okanye ube mkhulu njengeCoca-Cola; isibhakabhaka ngokwenene ngumda!
Abo bafuna ukunciphisa umngcipheko wabo wezomthetho.
Ukudibanisa lelinye lamanyathelo okuqala asemthethweni ekuthatheni ishishini lakho liye kwinqanaba elilandelayo kwaye kubalulekile ukuba ukunyusa imali kubalulekile. Umtyalomali weSavvy uya kuphonononga imodeli yeshishini kunye nokuma ekhangela imiqondiso yokuba ishishini lilinge elinobuzaza kwaye liza kuhamba umgama omde, ukubandakanya inyathelo elibaluleke kakhulu kubatyali mali abajonga utyalo-mali kwishishini lakho.
Ukuba ngumnini mali kuthengiso lwezindlu kwiQumrhu elime kakuhle, iNkampani yeTyala eliNqunyelweyo okanye ubuDlelwane obuQinisekisiweyo buya kubonelela ngolondolozo olufanayo lweshishini, ukhuseleko lweasethi kunye nezibonelelo zerhafu njengoko kuchaziwe apha ngasentla.